एप्पलले इंटेल छोड्छ र म्याक्स | मा यसको आफ्नै प्रोसेसरहरू प्रयोग गर्दछ ग्याजेट समाचार
हाल, एप्पलले आफ्ना आईफोनहरूमा आफ्नै प्रोसेसरहरू बनाउँछ, धन्यवाद जुन तपाईले उत्कृष्ट प्रदर्शन पाउनुभयो र सामान्य रूपमा एन्ड्रोइडमा फेला परेका प्रोसेसरहरू भन्दा बढि गर्नुहोस्। तर यसको म्याकहरूको मामलामा कम्पनीले इंटेल प्रोसेसरहरू प्रयोग गर्दछ। यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि कपर्टिनो कम्पनीको योजनाहरूले यसलाई छिट्टै नै परिवर्तन गर्ने छ। किनभने तिनीहरू आफ्नै प्रोसेसरहरू बनाउँदैछन्.
एप्पल इंटेल प्रोसेसरहरू खाडल गर्न चाहन्छ र २०२० बाट यसको आफ्नै प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसोभए कम्पनीले यी दुई कुरा मात्र दुई बर्षमा प्राप्त गर्न चाहन्छ। यो योजना कलमाता भन्ने पहलको एक हिस्सा हो जुन हिजो प्रकट भएको थियो।
कम्पनीले यसको उपयोगकर्ता ब्यवसायिक अनुभव एकीकृत गर्न चाहन्छ जुन हालको बजारमा सबै उपकरणहरूमा मार्दछ। थप रूपमा, यस्तो देखिन्छ कि योजना पहिले नै चलिरहेको छ। यसको परिणाम स्वरूप, इंटेल सेयर अमेरिकी शेयर बजारमा हिजो गिरावट आएको छ.
यो तेस्रो पटक हुनेछ जब एप्पलले यसको म्याक प्रोसेसरहरूमा वास्तुकला सार्नेछ। अब, तिनीहरू यस माइग्रेसन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछन्, जुन लामो हुने वाचा गर्दछ। तर जससँग कम्पनीले ठूलो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने आशा राखेको छ। यस तरीकाले, तिनीहरू हुनेछन् तपाईंको सबै उपकरणहरूको सबै कम्पोनेन्टहरूका लागि जिम्मेवार.
केहि चीज जसले क्षेत्रको अन्य कम्पनीहरूमा तपाईंको निर्भरतालाई घटाउँछ। थप, एप्पलको योजनाहरू पनि त्यहाँ म्याकमा पर्याप्त सुधारको लागि छन्। धन्यबाद यी नयाँ प्रोसेसरहरूको कारण उनीहरूसँग हार्डवेयर र सफ्टवेयर अन्तर्क्रिया गर्ने तरिकामा अधिक नियन्त्रण हुनेछ।
कम्पनीले आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टको बारेमा यी दावीहरूको प्रतिक्रिया देखाएको छैन, सामान्य जस्तो। तर प्रमुख मिडियाले यी योजनाहरूको बारेमा राम्रा विवरणहरू रिपोर्ट गरिसकेका छन्। त्यसैले सबै कुरा यो संकेत गर्दछ कि यो छ। एप्पलले यसको आफ्नै प्रयोगको लागि २०२० मा इंटेल प्रोसेसरहरू छोड्नेछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » एप्पलले म्याकमा आफ्नै प्रोसेसरहरू प्रयोग गर्नेछ
विश्वको सबैभन्दा ठूलो सौर्य संयंत्र साउदी अरेबियामा निर्माण गरिने छ